Warranty ရရှိနိုင်မှုနှင့် လိုအပ်ချက်များ
Warranty ရရှိနိုင်မှုများကို သက်ဆိုင်ရာ Device. များ၏ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်တွင် ဖော်ပြထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ Ring Up မှ ဝယ်ယူသူများအား ယခု ဖော်ပြချက်များကို သိရှိနားလည်ပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာ Device ပေါ်တွင် နှိပ်၍ အသေးစိတ် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
Warranty အတွက် စိတ်ပူပန်မှုမရှိရလေအောင် NAKZ Co., (Apple Authorized) ၏ Warranty မှန်ကန်မှုဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
iPhone များသည် NAKZ Co., မှ တစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရားဝင်တင်သွင်းသည့် Apple Myanmar အလုံးများဖြစ်၍ Apple Myanmar Warranty တရားဝင်ရရှိသောကြောင့် Warranty ပြန်လည်တောင်းခံရာတွင် မြန်ဆန်ပြီး QCD Technology Myanmar (Apple Authorized Service Center) သို့ Customer ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက် အလွယ်တကူသွားရောက်တောင်းခံနိင်သည်။
MacBook နှင့် Watch များကို Singapore သို့တိုက်ရိုက်ပို့၍ Apple ၏ Policy အတိုင်း အသစ်လဲ၍ဖြစ်စေ၊ ပြုပြင်၍ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
Warranty တောင်ခံရာတွင် Customer အနေဖြင့် NAKZ Co., တံဆိပ်ပါသော iPhone ဗူး၊ MacBook ဗူး၊ Watch ဗူးနှင့်အတူ NAKZ Warranty Card ကိုပါတစ်ပါတည်း သိမ်းဆည်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ Warranty ကုန်ဆုံးမည့်ရက်သည် https://checkcoverage.apple.com တွင် ဖော်ပြထားချက်အတိုင်းသာ အတည်ဖြစ်သည်။
HongKong Stock များဖြစ်သည့် iPhone Dual Sim များအတွက် ဆိုင် Warranty မရရှိနိုင်ပါ။ HongKong Warranty သာရရှိပါမည်။ HongKong သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံ အချိန်ကြံ့ကြာခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး ပို့ခ ကုန်ကျစရိတ်ကို Customer ဘက်မှ ကျခံရန်တာဝန်ရှိပါသည်။
Apple Accessories များ (ဥပမာ။ ။ Pencil, AirPods, Mouse, Keyboard စသည်) အတွက် ဆိုင် Warranty မရရှိနိုင်သည့်အတွက် Apple Warranty ပြန်တောင်းခံရာတွင် ပို့ခ ကုန်ကျစရိတ်ကို Customer ဘက်မှ ကျခံရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ Warranty ရရှိနိုင်မှုကို https://checkcoverage.apple.com တွင် Serial Number ဖြင့်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
Harman Kardon, JBL တံဆိပ်များအတွက် Warranty ပေးသော Stock များဖြစ်ပါက TMW ရဲ့ JBL Official Warranty Card ထည့်ပေးပြီး Warranty ရရှိနိုင်ပါသည်။ Warranty Card မပေးသော Stock များအတွက် Warranty မရရှိနိုင်ပါ။
Marshall, Bose, UE, B&O စသော တံဆိပ်များအတွက် Warranty ထောက်ပံ့မှု မရရှိနိုင်ပါ။
Beats by Dre Product များအတွက် ဆိုင် Warranty မရရှိနိုင်ပါ။ Apple Warranty ရရှိနိုင်ပြီး Warranty ကာလသည် iPhone ကဲ့သို့ Activate လုပ်မှ စမှတ်ခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက် တစ်နှစ်အပြည့် ရရှိရန်မလွယ်ကူပါ။ Beats by Dre Product များ၏ Warranty အား ၎င်း၏ Serial Number. ဖြင့် https://checkcoverage.apple.com တွင် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
GoPro Device များအတွက် Warranty ထောက်ပံ့မှု အပြည့်အဝ ရရှိပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ သက်ဆိုင်ရာ Device. များအတွက်သာ Warranty ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ဗူးအတွင်းပါဝင်သော Adapter, Cable, Earbuds များစသည်တို့အတွက် Warranty မရရှိနိုင်ပါ။
သီးခြား ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော ပစ္စည်းများအတွက် Warranty မရရှိနိုင်ပါ။
Not to be worried for warranty, we act on true warranty of NAKZ Co., (Apple Authorized).
iPhones are officially imported by NAKZ Co.,to Myanmar and have got official Apple Myanmar Warranty. It is swift to ask for warranty. Customer yourself can go and ask for warranty to QCD Technology Myanmar (Apple Authorized Service Center).
MacBook and Watch are provided service sending them back directly to Singapore by changing with new one or repairing them in accordance with Apple’s policy.
In asking for warranty, need to keep the iPhone box, MacBook box, Watch box that contained NAKZ Warranty Card. Available warranty is as before. The date of warranty expiring is determined as revealed at https://checkcoverage.apple.com.
RingUp-warranty is not available for iPhone Dual Sim from HongKong Stock. Those iPhones will get only HongKong Warranty. While sending them back to HongKong, sometimes time-delay can be happened and Customer have to take responsibility for sending charges and expenses.
Customer have to take responsibility for sending charges and expenses in asking for Apple Warranty for Apple Accessories e.g. Pencil, Airpods, Mouse, Keyboard etc because they are not available for RingUp-warranty. Available warranty can be checked at https://checkcoverage.apple.com with serial number.
For Harman Kardon, JBL brands, if the Stock gives warranty, TMW’s JBL Official Warranty Card is given for warranty, but warranty Card is not available for the brands if the Stock doesn’t not give warranty.
Warranties are not available for Marshall, Bose, UE, B&O brands.
RingUp-Warranty is not available for Beats by Dre Products. Apple Warranty may be got but the length of warranty doesn’t count after activating, like iPhone. So it is not easy to get for full one year. The warranty of Beats by Dre Products can be checked with its serial number at https://checkcoverage.apple.com.
Warranty is fully available for GoPro Device.
Copyright © 2017 Ring uP. All Rights Reserved